Muranka Badda Somaliya iyo keenya Oo Sii xoogeysanaya -
HomeWararkaMuranka Badda Somaliya iyo keenya Oo Sii xoogeysanaya
Muranka Badda Somaliya iyo keenya Oo Sii xoogeysanaya
June 9, 2019 F.G Wararka 0
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay sii xoogeysato, xilli uu hadda soo dhawaanayo waqtigii ay maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda go’aan ka soo saari lahayd muranka xadka badda ee u dhaxeeya labada dal, Sida lagu xusay Qormo lagu daabacay wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya.
Warqad diblomaasiyadeed oo ay Kenya u dirtay Soomaaliya 21-kii bishii May waxay ugu hanjabtay inay awood adeegsan doonto haddii ay muwaadiniinta Soomaaliya sii wadaan ka hor imaanshahada iyo burburinta darbiga ay ka dhiseyo xuduudda dhulka ee u dhaxeysa labada waddan.
“Sii wadista tallaabo kasta oo looga hor imaado ama wax loogu dhimo darbiga xadka waxaa looga jawaabi doonaa si ay awood Ku Jirto,” ayaa lagu yiri qormada warqadda oo ay saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, lana sii marsiiyay howlgalka Kenya ee Soomaaliya, Hase ahaatee Waxaa Waraaq lasii gaarsiiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 25-kii isla bishii May.
Warqaddaas ayey Kenya ku xustay eedeyn ay Soomaaliya ugu jeedisay in “si aan kala joogsi lahayn” loo carqaladeeyo howsha dhismaha darbiga, loona adeegsado haween iyo carruur waxyeello u geysta ciidanka ammaanka iyo kooxda dhismaha ku howlan.
“Kenya waxay qiyaaseysaa qiimaha ku kacaya Darbiga Iyo waxyeellada ay geysteen muwaadiniinta Soomaalida ah ay ka xun in dalkooda lagu soo Xadgudbo Dalkooda Hase ahaatee Dowlada Keenya ayaa qorsheyneysa inay dalbato magdhow,” ayaa lagu yiri warqaddaas oo ka koobneyd labo bog, uuna arkay wargeyska The Standard.
Sidoo kale , Kenya waxay Soomaaliya ku eedeysay inaysan dhankeeda ka xoojinin wanaagga ay Kenya sameyneyso.
Wargeyska The Standard ayaa sheegay in ilo wareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya, oo ka gaabsado in la xuso Magacooda , ay u sheegay in xukuumadda Somaliya ay dulqaad ka muujineyso cadaadisyo dheeraad ah oo ay dowladda Kenya sameyneyso, kuwaasoo ka dhan ah saraakiisheeda iyo dadkeeda ganacsatada ah, xilli laga war sugayo go’aanka maxkamadda ICJ.
Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa isla wargeyskan u sheegay in xukuumaddiisu aysan diyaar u ahayn inay sii xoojiso khilaafka diblomaasiyadeed.
“Ma daneyneyno inay arrintu noqoto far-far-ku-fiiq. Waxaan daneyneynaa inaan Kenya la yeelanno xiriir wanaagsan,” ayuu yiri Cawad.
Dhinaca kale Wasiir Cawad ayaa ku qoslay su’aashii uu wargeyska weydiiyay ee ku saabsaneyd wararka la isla dhex marayo ee la xiriira in Kenya ay xulafo la sameysaneyso maamullada Soomaaliya, gaar ahaan Somaliland.
” dowladda Soomaaliya waxa ay Kenya u ogolaatay inay qunsuliyad ka sameysato Hargeysa”, ayuu yiri, isagoo markaas ula jeeday in Hargeysa in ay tahay magaalo ka tirsan Soomaaliya.
Go’aanka maxkamadda caddaaladda ee ICJ ay kasoo saareyso dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inuu soo baxo sannadka dambe.